शेयर बजारका बादशाह वारेन बफेटका लगानी मन्त्र - IAUA
शेयर बजारका बादशाह वारेन बफेटका लगानी मन्त्र
ramkrishna July 3, 2017	शेयर बजारका बादशाह वारेन बफेटका लगानी मन्त्र
लगानीगुरुका केहि महत्वपूर्ण लगानीका मन्त्रहरु जो नया तथा पुराना लगानीकर्ताहरुका लागि सधै महत्वपूर्ण हुनसक्छन ।
छोटो समयमा धेरै कमाउने चाहना सबै को हुन्छ । यहि चाहनाले कतिपय मानिसहरु गलत बाटो अँगालछन् त कसैको लगानी गलत ठाउँमा फस्छ । धेरै कमाउने इच्छा कसको हुदैन तर त्यसको एउटा समय सिमा हुन्छ । आफु संग भएको पुंजीलाई सहि ढंगले लगानी गर्न सके त्यसको उचित प्रतिफल भने पक्कै पनि पाउन सकिन्छ । लगानीको लागि एउटा उपयुक्त गन्तब्य हो शेयर बजार । जहाँ धेरैले कमाएका छन् भने धेरैले गुमाएका पनि छन् । यो एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ एक गलत निर्णयले आफ्नो जीवनभरको कमाई पुरै डुब्न सक्छ । शेयर बजारमा लगानी गरेरै आफुलाई विश्वको धनाड्य व्यक्तिको रुपमा स्थापित गर्न सफल वारेन बफेट लगानी गर्दा धेरै सम्हालिएर लगानी गर्नु पर्ने बताउछन् । समय समयमा उनका लगानी सम्बन्धि थुप्रै पुस्तक तथा लेख रचनाहरु प्रकाशित भई रहन्छन । तिनै लगानीगुरुका केहि महत्वपूर्ण लगानीका मन्त्रहरु जो नया तथा पुराना लगानीकर्ताहरुका लागि सधै उत्तिकै महत्वका साथ लिइन्छ ।
१. विवेकपूर्ण लगानी निर्णय
बफेट का अनुसार ‘यदि कसैले उसको आवश्यकता बेगरको सामान किन्छ भने चाडै उसले आवश्यकीय वस्तु बिक्रि गर्छ’ । कहिलेकाही मानिसहरु आफुले आवश्यक नपरेको वस्तु पनि अरुलाई देखाउनको निम्ति किन्ने गर्छन । यसै मनोविज्ञानको फाइदा उठाऊछन् विभिन्न वस्तुहरु उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुले बिज्ञापन मार्फत । यस्तो बेला हामीले आफै संग प्रश्न गर्नु आवश्यक छ , के यो वस्तु अति आवश्यकीय छ त रु कहिँ त्यसमा बढी लगानी त हुदै छैन ।
लगानी गर्दा सधै त्यसको प्रतिफल हेर्नु अति आवश्यक छ त्यति मात्र नभई त्यो संगै समान अन्य कम्पनीको प्रतिफल पनि दाज्नु जरुरी छ ।
‘अनावश्यक लगानी भन्दा बचत उपयुक्त’ बफेट भन्छन् ‘हिजो कसैले रुख रोपेको कारण आज तिमी छायामा बस्न पाएका छौ’ । सुनौलो भविष्यको लागि आज बचत गर्नु जरुरी छ । हामी बचत त गर्छौ तर आकस्मिक कोषको लागि भने पर्याप्त बचत गर्दैनौ किनकि हाम्रो ज्यादै ध्यान अल्पकालीन योजनाहरुमा मात्र केन्द्रित हुन्छ । मानिसका आवश्यकता कहिल्यै पुरा हुदैनन् त्यसैले आजैबाट अत्यावश्यक बाहेकका सबै बस्तुहरुमा गरिने लगानी बचत गरौ र एउटा कोष बनाएर उपयुक्त ठाउमा लगानी गरौ ।
३. धर्य गर्ने बानी बसालौ र दिर्घकालिन योजना बनाऊ
बफेट भन्छन् ‘तिमीसंग जतिसुकै ज्ञान र सीपको भण्डार रहेपनि त्यसको औचित्य रहदैन, यदि तिमीले समयमा त्यसको सदुपयोग गरेनौ भने’ ।
मुद्राको एउटा प्रवृति हुन्छ यो राता रात डङ्गुर लाग्दैन । रातारात पैसा कमाउने कुनै जादुको छडी हुदैन यसको लागि त उपयुक्त लगानी निर्णय र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको लागि समय आवश्यक हुन्छ । दिर्घकालिन लगानी, लगानीको उचित क्षेत्रमा बाँडफांड, आफ्नो जोखिम बहन क्षमता, लगानीको लागि सहि बित्तिय औजारको छनौट आदि कुराहरुमा ध्यान पुर्याउनु सके लगानी सुरक्षित हुनेछ । बजारको उतार चढाव बाट छोटो समय मा धेरै कमाउन खोज्नु मुर्खता मात्र हुनेछ अरु केहि होइन ।
‘जोखिम तब उत्पन्न हुन्छ जब तिमी के गरि रहेका छौ तिमी आफैलाई थाहा हुदैन’ बफेट
हामी सबैको चाहना हो छोटो समयमा बढी पैसा कमाउने । अनि हामी लगानी गर्छौ त्यस्तो कम्पनीमा जुन कम्पनीले ज्यादा प्रतिफलको घोषणा गरेका हुन्छन तर हामी बिर्सनछौ कि त्यो ज्यादा प्रतिफल संगै जोडिएको जोखिमलाई । यस्तो तब हुन्छ जब हामी लोभी, ज्यादा जान्ने हुन खोज्छौ । सफलताको कुनै छोटो बाटो हुदैन त्यसको लागि निरन्तर प्रयास, लगन अनि मिहेनत गर्नु पर्छ ।
उधारो कहिल्यै राम्रो मानिदैन । तर उचित व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्न जाने यो पनि राम्रो हुन सक्छ । त्यसो त उधारो कुनै उद्देश्य बेगर लिने गरिदैन साथै फिर्ता गर्ने स्रोतको पनि व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । आफुले लिएको उधारोमा तिर्नु पर्ने त्यसको लागत र आफुले त्यसको सदुपयोगबाट प्राप्त प्रतिफल दाजेर हेर्दा यदि प्राप्त प्रतिफल ज्यादा हुने भए मात्र उधारो लिने गर्नु पर्छ ।
अन्त्यमा तपाई लगानी गर्दै हुनु हुन्छ र तपाई संग उचित ज्ञान छैन भने विज्ञहरुको सल्लाह लिनु पर्छ, लगानी गर्नु पूर्व थुप्रै अध्ययन गर्नु पर्छ र आफ्नो आकस्मिक आवश्यकता विचार गरेर मात्र लगानी गर्नु पर्छ ।
Previous Previous post: के तपाई शेयर वजारमा लगानी गर्दै हुनु हुन्छ, यसरी लगानी गरे फाइदा धेरै लिन सकिन्छ
Next Next post: म्युचल फण्ड भनेको के हो ?? सामान्य जानकारी सहित